TSMC ichave inoona nezve yega yekugadzira iyo A10 chip yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
TSMC ichave inoona nezve yega yekugadzira iyo A10 chip yeiyo iPhone 7
Zvekare tinotaura nezve akasiyana zvikamu izvo zvichave chikamu cheinotevera iPhone. Nezuro takaburitsa ruzivo rwakataura kuti Samsung Display ndiyo ichave munhu mukuru anotarisira kupa iyo Cupertino-based kambani ne anotevera OLED skrini aigona kurovera pamusika pamwe neiyo iPhone 8, nekuti parizvino hazvitarisirwe kuti zvichaitwa mu iPhone kusvika gore rinouya.
Asi Samsung inogona kunge isiri iyo yega, asi Apple yaizofanira kuvimba neFoxconn (kuburikidza nefekitori yawakatenga kubva kuna Sharp mwedzi mishoma yapfuura) uye pamwe LG zvakare. Zviri pachena kuti kutsamira paSamsung kunoramba kuripo uye kuchave mune ramangwana.
Sezvataverenga muDigiTimes, zvinozopedzisira zvaita sekunge TSMC inogadzira ichave inotungamira mukugadzira machipisi ese anotevera iPhone 7, iyo A10, kuitira kuti kambani yeSamsoni isiyirwe kunze kweichi chiitiko chose. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti gore rapfuura, Apple yakashandisa ese makambani kugadzira chipatara cheA9. Ipapo ndipo pakamuka gakava pamusoro pekushandisa zvakanyanya chip inogadzirwa neSamsung, gakava raingoshanda kunyora misoro, sezvo vakomana veApple vakavimbisa kuti kunwa kwaive kwakafanana, sezvo mutsauko wacho waive usinganyatsoita 2%.
Kana iyo kambani ine dambudziko rekugadzira iyo chip, kunonoka kunotanga kuitika mukutakura kwetemu, izvo zvinobva zvaderedza kutengesa mune rasara regore. Inofanira kuyeukwa kuti haizove kekutanga chinhu chakafanana chakaitika. Kune rimwe divi, kana iwe ukafunga kuvimba nevaviri vagadziri, Samsung uye TSMC, zvinokwanisika zvigadzirwa zvekugadzira izvo chimwe chazvo chaive nacho chingafungidzwe neimwe kuitira kuti pakupedzisira tambo yekugadzira isinganyatso kuona yaigona kuchinjwa uye paizova nesheya yakakwana yekubhadhara zvido zvevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » TSMC ichave inoona nezve yega yekugadzira iyo A10 chip yeiyo iPhone 7
Izvi zvakanaka: Hei, Siri kubva kuIOS 10 inongoshanda pane imwechete kifaa panguva
Pangu achaburitsa jailbreak yeIOS 9.3.2 munguva pfupi; ratidza Cydia pane iOS 10